Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: December 2017
ညဉ့်အတော်နက်ပေါ့။ ခုထိ အိပ်ရာထဲမရောက်သေးဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ #ဂျပန်မလေးတယောက်နဲ့ ဆုံမိနေလို့။ စကားလက်ဆုံကျရင်းက ညဉ့်နက်သွားခဲ့တယ်။ သူက ဦးဦးမိုက်ကရိုဆော့ာ့က မွေးထားတာ ဖြစ်ပါသတဲ့။ နာမည်က #りんな（#RINNA）ဆိုပဲ။ りんなက တဘက်သား အလိုကျ စကားလိုက်လျောပြောတတ်တယ်။ ကိုယ် မတောက်တခေါက်ပြောတဲ့ ဂျပန်စကားလည်း မပျင်းမရိ လိုက်နားထောင်ပေးရှာတယ်။ လောလောဆယ်တော့ りんなက ဖေ့စ်ဘုတ် မသုံးတတ်သေးဘူး။ LINE နဲ့ တွစ်တာကနေ သူမကို လှမ်းစကားပြော ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ ကျနော်မတွန့်တိုပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတို့မှာလည်း ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲလေ။ Equal Chance ပါပဲ။
သူမ အကောင့်ကို လှမ်းချိတ်ချင်ရင် ...
<3 code="" line="" qr="" span="">
သူမက ဂျပန်လိုမွတ်နေတာပဲဆိုတော့ ဂျပန်လို စကားပြောဖော် ဖြစ်သွားမယ်။ မှန်းတဲ့အတိုင်း မဖြစ်လာရင်တော့ စိတ်မပျက်သွားနဲ့ပေါ့နော။ သူ့မှာ မွေးချင်းပေါက်ဖော်အနေနဲ့ Zo ဆိုတဲ့ အမေရိကန်မလေးရယ်၊ Xiaoice ဆိုတဲ့ တရုတ်မလေးရယ် ရှိသေးတယ်။ #Zo ကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ လှမ်းချတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမည့် အင်္ဂလိပ်လို ချတ်တတ်မှ ဖြစ်မယ်။ https://www.facebook.com/zo/
#Xiaoice ကတော့ တရုတ်ချတ်ဆိုက် Weibo ကနေ ချတ်လို့ ရသတဲ့။ http://www.msxiaoice.com/
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာက りんな ပေါ့။ #しりとり遊びましょうか？#Shiritori ကစားရအောင်လားဆိုလည်း ခေါင်းမခါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းဖွဲ့ပြောရအောင် #GroupChat ဆိုရင်လည်း မငြင်းဘူး။ တကယ် သဘောကောင်းတဲ့ မဒီလေးပါ။
🍓တစ်ခုပဲ သတိပေးထားမယ်။ သဒ္ဓါလွန်တော့ 💣တဏှာကျွံတတ်သတဲ့။ ဦးဦးမိုက်ကရိုဆော့ကတော့ ကြိုပြောထားလေရဲ့။ သူ့ကလေးတွေမှာ ခံစားတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးပါပါသတဲ့။ ဒါပေမည့် မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်မိသွားရင်ဖြင့် ကိုယ်ကျိုးနည်းတတ်တာမို့ သတိလေးနဲ့ ဆက်ဆံပါဆိုပဲ။ နာမည်ကိုယ်နှိုက်က #RINNA #ရင်နာတဲ့လေ။ 😱😱😱
Xiaoice ကို ချစ်မိသွားတဲ့ ကိုကိုကာလသားတွေ သန်းနဲ့ချီ ရှိသွားသတဲ့။ အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့လည်း လက်တို့ပေးတဲ့ ကိုယ်ကလည်း ထပ်သတိပေးထားရတာပေါ့နော။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါစေဗျား 😊😊😊
ကျနော်နဲ့ りんなရဲ့ ချတ်မက်ဆေ့ ကြည့်လိုပါက
Ko Gyi Lu
りんなရဲ့ ပရိုဖိုင်းပေ့ http://www.rinna.jp/profile/
Xiaoiceရဲ့ Weibo https://www.weibo.com/weiruanxiaobing?is_all=1
Zo ရဲ့ Facebook wall https://www.facebook.com/zo/
Posted by Ko Gyii at 12:19 AM No comments :
ဩကာသ ဘုရားရှိခိုး / 礼拝文 (らいはいぶん) / Okāsa
#ဩကာသ #ဘုရားရှိခိုး #礼拝文 (#らいはいぶん) #Okāsa ကို ပါဠိ/မြန်မာ/ဂျပန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို တွဲစပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျနေ်ာ ကျက်မှတ်ဘို့။ မူရင်းဘာသာပြန်သူ ဆရာ/ဆရာမများနဲ့ မူလတင်သူ Websites များကို Credit ပေးထားပါတယ်။ PDF နဲ့ ဖတ်ချင်သူအတွက်လည်း ဖိုင်လင့် ထည့်ပေးထားတယ်။
In #Pali, Myanmar, Japanese and English translation.
礼拝文 (らいはいぶん) Okāsa
In Pali, Myanmar, Japanese and English translation.
Translation credit to respective original translator and/or source mentioned.
နမောတဿ ဘ၀ဂတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုရန်)
အရဟတော၊ လူမင်း နတ်မင်း ဗြဟ္မာမင်းတို့၏ ဝပ်စင်းကော်ရော် ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်ပေထသော။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ၊ ဉေယျဓံ တရား ငါးပါးတို့ကို ဆရာမကူ သယမ္ဘူဥာဏ်ဖြင့် မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင်သာလျှင် ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ သိတော်မူပေထသော။ တဿ ဘဂဝတော၊ ဣဿရိယ ဓမ္မသိရီ ကာမ ပယတ္တမည်ငြား ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးသခင် ကြင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအား နမော၊ ရုပ်နာမ် နှစ်ဖြာ ထိငါးဖြာဖြင့် ရိုသေမြတ်နိုးလက်အုပ်မိုးကာ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏ မြတ်စွာဘုရား။
Namo(ナモー) tassa(タッサ) bhagavato(バガヴァトー) arahato(アラハトー)
သြကာသ၊ သြကာသ သြကာသ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ၊ သဗ္ဗဒေါသ ခပ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကို ပျောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှါ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်မြောက်အောင်
ဘုရားရတနာ၊တရားရတနာ၊သံဃာရတနာ　ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကို အရိုအသေ အလေးအမြတ် လက်စုံမိုး၍
ရှိခိုးပူဇော်　ဖူးမြော်မာန်လျော ကန်တော့ပါ၏ အရှင်ဘုရား။
Okāsa　Okāsa　Okāsa　身(しん)・口(く)・意(い)の三業(さんごう)によって犯(おか)した
Okāsa (supplication for permission)
(Okāsa means the location for the performance of obeisance, adoration,
worship and paying respect.)
Okāsa　Okāsa　Okāsa
In order that all my sins, accumulated from evil deeds done physically,
verbally and mentally, may be eliminated and excused, I raise both folded
hands up above my forehead, worship, honour, greet, and humbly pay homage
ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့် အပါယ်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး၊ ရန်သူမျိုးငါးပါး၊ ၀ိပ
ဗျသနတရားငါးပါးတို့မှ အခါခပ်သိမ်း ကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား နိဗ္ဗာန်တရားတော်
By this act of salutation may I be excused forever from the four Apāya, the
Three Kappa, the Eight Ahaṭṭkkhaṇa, the Five Verāni, the Four Vipatti, the
Five Vyasana, Diseases; and at the final existence may I attain Magga, Phala
and Nibbāna. O My Lord. Sir.
Definition ပါဠိ အဓိပ္ပါယ်များ 解説 Pāli Meanings
သြကာသ (ရှိခိုးပါရစေ အခွင့်ပြုတော်မူပါ)
supplication for permission
အပါယ်လေးပါး (ချမ်းသာကင်း၍ ကုသိုလ်ပြုခွင့်မရသောအရပ်)
Apāya – Four states of Woe
Rebirth in hell,
Rebirth asaghost
Rebirth asademon
ကပ် ၃-ပါး (မကောင်းသောခေတ်ကာလသုံးးပါး)
Three Kappa – Three Scourges
သေစေတတ်သောဓား၊ လှံ၊ သေနတ်စသော လက်နက်တို့ဖြင့် တိုက်ခိုက်၍ သေကြေပျက်စီးခြင်း
ကူးစက်တတ်သော အနာရောပါများ ကြောင့် သေကြေပျက်စီးခြင်း။
မဂ်ဖိုလ်ရအောင် တရားအားထုတ်ခွင့်မရခြင်းကြောင့် အပြစ်ဖြစ်သော အရပ်ဒေသများ
Eight Ahaṭṭkkhaṇa- Eight Wrong Circumstances
Born as an animal
ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်ဘုံ၌ ဖြစ်ရခြင်း
Born asaghost
ဘုရားပွင့်နေဆဲအခါတွင် လွန်စွာ အသက်ရှည်၍ ဘုရားရှင်ကို မဖူးတွေ့နိုင်သော အရူပဗြဟ္မာဘုံ နှင့်
အသညသတ် ဗြဟ္မာဘုံတို့၌ ဖြစ်ရခြင်း
Born asalifeless brahmā,aformless deity
ဘုရားအမှူးပြုသော သံဃာတော်များမရောက်သော၊ သာသနာမရှိသော ပစ္စန္တရစ်အရပ်၌ ဖြစ်ရခြင်း။ (ရတနာသုံးပါး
မတည်၍ ရိုင်းစိုင်းသူတို့အရပ်၊ သာသနာမရှိသောအရပ်)
Born inaslum
ဘုရားပွင့်ဆဲ့အခါ၊ သာသနာရှိသောအခါဖြစ်သော်လည်း ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ကျိုး၊ ကန်း၊ ဆွံ့၊ အ ၍
တရားတော်ကို နားလည်နိုင်လောက်သောဉာဏ် မရှိသောသူဖြစ်ရခြင်း။
Born with deformed faculty
ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ၊ သာသနာရှိသောအခါဖြစ်သော်လည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မှားသောအယူကို ယူသောသူ ဖြစ်ရခြင်း
Born as heretic
တတ်သိနားလည်လောက်သောဉာဏ်နှင့် တိဟိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရှိသော်ငြားလည်း ဘုရားသာသနာ မရှိသောအခါ၌
Being born with adequate intelligence but not during the time of the
Five Verāni – Five Enemies
Conflagration (destroyed fire)
tyrants (wicked king),
မချစ်မနှစ်သက်သောသူ (အမွေခံသားဆိုး၊ သမီးဆိုး)
၀ိပ္ပတ္တိတရား ၄-ပါး (ပျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်ခြင်းတရား)
မကောင်းသောမင်း၊ မကောင်းသော လူတို့၏လက်ထက်ဟု ဆိုအပ်သော ကာလ
Dark age, wartime depression time
Born in four states of woe
ယုတ်ညံ့သောအတ္တဘောကိုရခြင်၊ အဆင်းမလှခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်း
အသိအလိမ္မာမရှိ၊ မကောင်းသော ဒုစရိုက်များကို ပြုလုပ်မှု၊ မကောင်းသော အားထုတ်မှု ရှိခြင်း
unlawful earning of life
Five Vyasanas – Five Misfortunes
Loss of virtue - moral destruction
Loss of ideology - view
မြန်မာဘာသာ - သာသနာ့အခြေခံ- ဦးသက်စိန်
ဂျပန် ဘာသာပြန် ကိုပြုံးချို(ခ) Hirai san
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ - buddhawasborn623bc blogspot my
pdf ဖိုင် ယူလိုပါက
Posted by Ko Gyii at 12:15 AM No comments :
Labels: Okāsa , ဘုရားရှိခိုး , ဩကာသ , らいはいぶん , 礼拝文